IMITHETHO NGOKUHANJISWA NEMBUYISELO | Maxhosa
Amadoda / Amabhinqa
IMITHETHO NGOKUHANJISWA NEMBUYISELO
Izicelo ziyoweliswa xa iMaXhosa ifumene yonke imali ekuthengwa ngayo imveliso, nazo zonke iindleko zokuthuthwa kwemveliso. Imveliso yohanjiselwa apho umthengi ebevumele ukuba ihanjiselwe khona xa esenz isicelo, ngaphandle kokuba umthengi uye waphinda watshintsha idilesi yendawo anqwenela ukuba isicelo sakhe sihanjiselwe khona kwi-Website yeMaXhosa. Kuluxanduva lomthengi ukuqinisekisa ukuba ukhona umntu ozokulanda ipasile yakhe kwidilesi yendawo ebevumele ukuba ihanjiselwe kuyo, ngamaxesha omsebenzi (phakathi ko 08:00 no 17:00 ngentsuku zokusebenza) ukuze amkele ipasile yakhe. Umthengi kuluxanduva lwakhe ukubhatala iindleko zika noposi ukuba kwafikwa kungekho mntu wokwamkela ipasile yakhe kulondawo idilesi ikhomba kuyo.
UKUHANJISWA KWEMPAHLA EMVA KWEXESHA
I-MaXhosa yokwenza ngako konke ukuqinisekisa ukuba ukuhanjiswa kwemveliso kwenzeka ngexesha lesivumelwano ebelibekiwe kwi-Website malunga nesicelo somthengi. Nangona kunjalo, ubungakanani nobunintsi besicelo kunye nebanga phakathi kweMaXhosa nedilesi yesicelo ingazezinye izinto ezibangela ukufika kwepasile kuthathe ixesha. Umthengi wokwaziswa ngamaxesha onke xa kuthe kwakho ukulibaziseka ekuhanjisweni kwesicelo sakhe. Kwizimo ezinje, ixesha elimisiweyo elitsha lilo ekuyohanjiswa ngalo ipasile, liyokuma endaweni yexesha ebelibekiwe ngaphambili kwi-email yesigximfizo echaza umhla wokubhatalelwa kwemveliso kaMaXhosa.
UKURHOXISWA KWESICELO NEMBUYISELO
Umthengi kulindeleke arhoxise isicelo sakhe kwisithuba semini ezisixhenxe (7), kwiintsuku zokusebenza xa engavuyiswanga yimveliso ayifumeneyo. Imveliso kufanele ijikiswe ikwisimo sayo sangaphambili, ineplastiki yokuyinciphisa, imibhalo nazo zonke izinto ebezikwibhokisi yepasile. Yonke imveliso ejikiswayo kufanele ikhatshwe zimpepha ezichaza ukuthengwa kwayo. Imveliso mayibuyiselwe ngeposi kwidilesi yendawo yakwaMaXhosa.
Imithetho yabucala Imimiselo nemiqathango
iMaXhosa Africa 2020